जनताको शिर झुक्ने काम गर्ने छैन : दामोदर भण्डारी – SidhaRekha
जनताको शिर झुक्ने काम गर्ने छैन : दामोदर भण्डारी
२०७४ पुष ४, मंगलवार १३:३० December 19, 2017
बैतडीको पाटन नगरपालिका ६ स्थायी घर भएका दामोदर भण्डारीले स्नातकतह सम्मको अध्ययन गरेका छन् । ४४ वर्षीय दामोदर भण्डारीले २०४६ सालको जनआन्दोनलमा नेकपा मालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियु (पाँचौं) मा बाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए ।
२०५० सालमा अनेरास्ववियु बैतडीको कार्यभार सम्हालेका भण्डारी राजनीतिक खुवी भएका व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन् । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा पाटन ९ को वडा सदस्यमा निर्वाचित भण्डारी २०६९ सालमा एमाले जिल्लाकमिटी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनि २०७० सालमा भएको दोश्रो संबिधानसभा निर्वाचनमा बैतडी क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थराज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका भण्डारी बाम गठबन्धन बैतडीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी प्राप्त गरेका छन् । राजनीतिक रुपमा क्षमतावान भण्डारी जनतामाझ भिज्नसक्ने खुवी भएका नेताको रुपमा चिनिन्छन् । भण्डारी छोटो समयमा धेरै राजनीतिक छलाङ् मार्ने मध्येका एक हुन् । सामान्य भएपनि राजनीतिक पारिवारिक पुष्टभुमिमा हुर्केका भण्डारी जनतामाझ लोकप्रिय छन् ।
यिनै दामोदर भण्डारी संग लोकेस साउद र मोहन चन्दले गरेको सम्वाद:
निर्वाचित भएर अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
जनताले अपार माया गरेर मलाई निर्वाचित गराएका छन् । अहिले म बैतडीको प्रतिनिधित्व गर्दैेछु । यतीवेला जनताले मलाई भारी मतले जिताउनु भो तपाईको मिडीया मार्फत बैतडीका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजु भाई दिदीबहिनी प्रति अभार ब्यक्त गर्न चाहान्छु । यती वेला हामी निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछी आममतदाताको विचमा धन्यबाद दिनका लागी पालिकास्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरि जनताको घरदैलोमा गईरहेका छौ ।
प्रतिनिधी सभा सदस्य भएका कारण प्रदेस न. ७ का एजन्डाहरुलाई केन्द्रमा कसरी उठाउनुहुन्छ ?
प्रदेस न. ७ मा सबभन्दा बढी गरीवी अभाब र पुर्वाधारको कमी रहेको छ । यस सुदुरपश्चिम लाई सुन्दरपश्चिम बनाउन चाहान्छौ । हामी संग गरीवी अभाब मात्रै छैन यहाँ प्रचुर मात्रामा स्रोत साधन पनि छन् । त्यसको प्रयोग गर्छौ जहाँ पञ्चेश्वर र सेती परियोजना जो राष्टिय राजनितीमा चर्चामा रहेका छन् । यो देसलाई समृद्धीको बाटोमा लैजान त्यस्ता आयोजनालाई अगाडी बढाउन पहल गर्छौ । यतीमात्र हैन कृषीजन्य उत्पादन, जडीवुडीजन्य उत्पादन र खानीजन्य उत्पादन छन् त्यसैले ७ नं. प्रदेसलाई समृद्ध वनाउन यी स्रोत सोतसाधनको प्रयोग गर्न पहल गर्नेछौ । जसरी जनताको जनमतवाट वामगठवन्धन लाई भारीमतका साथ ७ नं. प्रदेसमा जनताले जनादेस दिएका छन् त्यो जनादेसको सम्मान गर्नको लागी हामी सांसदमा सिंगो सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नेगरी यहाँका मुद्दालाई उठाउनेछौ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको वारेमा बर्षौ देखी कुरा चल्दै आएको छ तपाईले पनि उठाउनुभो यसमा जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्न चाहानुहुन्छ ?
म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु की नेकपा एमालेका अध्यक्ष आदरणीय नेता केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निती कार्यक्रम बजेट वक्तब्यमा पञ्चेश्वर परियोजना पश्चिमसेती आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्टिय गौरबका आयोजनामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडी बढाएको थियो त्यसै सरकाले पञ्चेश्वरको डिपिआर निर्माणको लागी पहल गरी अन्तीम चरणमा पुगाएको छ । अझैपनी यस्ता आयोजनालाई जोडतोडका साथ उठाएर कार्यान्वयनको लागी पहल चाल्नेछौ ।
सरकारको पाटनलाई स्माटसिटी बनाई जनसख्या वसाल्ने जुन १० वर्षे लक्ष थियो त्यसलाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ, के त्यो सम्भव छ ?
हामीले परिकल्पना गरको पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग नामाकरण गरिएको छ । अहिले यतीवेला पहाडको जनसङ्ख्या घटदै जाने तराईको जनसङ्ख्या बढदै जाने जुन नेपालको राजनितीमा समेत सन्तुलनको प्रभाव परेको छ । हामीले यि मध्य पाहाडका १० ओटा नमुना सहरहरुको परिकल्पना गरेका थियो । त्यो जनता लाई राज्यको तर्फबाट सहज रुपमा सेवासुविधा प्रदान गर्नकालागी हामीले अगाडी बढाएका यि कार्यक्रमलाई अब बन्ने बामगठवन्धनको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर पहाडका जनतालाई पनि उच्च सेवासुविधा दिनकालागि कदम चाल्ने छौ र बहुसंख्यक जनतालाई सहज रुपमा राज्यका सेवासुविधा प्रदान गर्नका लागी यो कार्यक्रमको सान्दर्भिकता महसुस गरेका छौ र अबको सरकाले प्रदेस नं. ७ मा खासगरी बैतडीको पाटन र अछामको साफेबगरका २ ओटा सहरलाई केन्द्रमा राखेर विकासका पुर्वाधारहरु निर्माण गर्नेछौ ।
तपाईको ५ वर्षे कार्यकालमा बैतडीको पाटन सहर कस्तो हुन्छ ?
अहिले त्यसको डिपिआर तयार भैरहेको छ । हामीले बस्ती विकास लाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने सहरको नमुना कसरी निर्माण गर्ने खेलमैदान, पार्क, विद्युत, कलेज, अस्पताल कस्तो हुने यस्ता अधारभुत कुरालाई जनताले सहजै उपयोग गर्न सकुन, तिनै कुरामा केन्द्रित भएर अगाडी बढनेछौ । अव जनताले पनि महुसुस गरुनकी पहाड बाट सेवासुविधा नपाएर तराई नजानको लागी सबै सेवासुविधा पहाडमै उपलब्ध गराउने बताबरण मिलाउने छौ ।
बैतडीवासीले अत्यन्त भारीमतका साथ मलाई जिल्लावाट प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिनुभयो, म बैतडीका सम्पुर्ण आमजनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । जनताले दिएको आदेश शिरोधार्य गर्नेछु, जनताको शिर झुक्ने गरेर कुनै काम गर्ने छैन जनताको सेवाको लागी म अहोरात्र खटनेछु ।
के के पुर्वाधार पहाडमा थप्न सकिएला ?
हामीले यतीवेला अधारभुत कुराहरु अस्पताल नभएका कारणले मानिसहरु तराई झर्छन शिक्षालय नभएर, सडक नभएर उत्पादित वस्तु बजार सम्म ल्याउन सकेका छैनन् हामी उत्पादन संग जोडने गरी सडक निर्माण गर्ने छौ, विद्युत, संचार खानेपानी लगायतका अधारभुत कुराहरुको परारम्भ तयार गनेर्छौ ।
बैतडी जिल्लाको सन्दर्भमा तपाईका प्राथमिकताका विषयहरु के-के हुन ?
बैतडी जिल्लामा शिक्षा स्वास्थ्य सडक पुर्वाधार सिचाई खानेपानीका अधारबाट हामीले अधारभुत सेवाहरु सहुलियत बाट ५ वर्षको अवधीमा जनतालाई प्रदान गर्न पहल गरि पुरा गर्ने छौ ।
अन्तमा बैतडीबासीलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
बैतडीवासीले अत्यन्त भारीमतका साथ मलाई जिल्लावाट प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिनुभयो, म बैतडीका सम्पुर्ण आमजनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । जनताले दिएको आदेश शिरोधार्य गर्नेछु, जनताको शिर झुक्ने गरेर कुनै काम गर्ने छैन जनताको सेवाको लागी म अहोरात्र खटनेछु । म यो मिडियामार्फत मतदाताहरुलाई यो अह्वान गर्न चाहान्छु ।
अघिल्लोकाँग्रेस नेता परियारको निधन
पछिल्लोबैतडीका सांसदद्वारा विद्युत् विस्तारका लागि पहल